Real Estate, Yekukwereta | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Rudzi: Real estate, Mortgage
Ndinofanira kuisa chikwereti nguva isati yasvika here?
Ini ndinofanira kubhadhara yangu mogeji pamberi pechirongwa? hapana bhenefiti, iwe uchabhadhara chikwereti chakataurwa muchibvumirano, kunyangwe bhanga rimwe nerimwe rinogona kupa zvaro zvaro mamiriro akafanana, saka ndinokurudzira kugadzirisa nyaya iyi ne ...
Ndinogona here kushandisa maternity capital pakutengesa mumba? Uye kuti ungazviita sei?
Ndinogona here kushandisa maternity capital kana ndichitenga kamuri? Unozviita sei? maternity capital inogona kushandiswa kubhadhara chikwereti chemogeji. Iyo shoma nhamba yemabhangi makamuri ekukweretesa. Kutenga chivakwa pa ...
Zvinorevei kuti "furati nezvikamu"?
Zvinorevei kuti "furati nezvikamu"? Chikwereti chemogeji chakasiyana nehurongwa hwechikwereti. Chekutanga pane zvese, inguva yacho. Vagadziri vashoma chete ndivo vane enguva-refu yekumisikidza zvirongwa zvemakore 510. Vazhinji vanopa zviyero kusvika pagore. Izvi…
Chikwereti chichigadzirisa chii ichocho?
Kugadzirisazve chikwereti chii icho? Kana iwe wakagamuchira chikwereti uye pasina mukana wechimwe chikonzero chekuchiripa, ipapo unogona kubata kubhangi kuti rivakezve chikwereti: ndiko kuti, unogona kupihwa kumbomira ...
chii "chinotengeswa nebhuku rebindu"? zvakakodzera kutenga cottage yakadaro?
chii "chinotengeswa nebhuku rebindu"? zvakakodzera kutenga cottage yakadaro? "Bhuku rebindu", kana "bhuku renhengo" igwaro rinosimbisa kuve kwemunhu mune chero gadheni, dacha kana ...
chii chiri kutengeswa kusununguka, somuenzaniso zvivako
chii chiri kutengeswa mahara, semuenzaniso furati kune mamwe madhiri - iwe unotengesa yako, iwe unotenga imwe, uye kune yekutengesa net - unoda mari! ... yemahara - isina kukomberedzwa nemitoro inoiswa pachinhu (imba) - mu ...
Zvinorevei kuti kutengeswa nekutengwa kweimba ine "ZVAKAITIKA" zvinorevei?
Zvinorevei kutenga kwemafurati nekutengesa kutengeserana ne "ZVINODZIDZA" zvinorevei? ndiko kuti, iwe unogona kutenga imba kana kwete =) kana iwe uchitenga imba ino, kana iwe uchapihwa imwe. zvirinani usabvumirana ...
chivako chitsva kana dzimba dzechipiri!
chivakwa chitsva kana imba yechipiri! Ini ndinongotenga zvese zvitsva. Iye zvino unogona kutenga imwe yakapera imwe nekupedza, yakachipa pane yechipiri imba Izvo zvese zvinoenderana nemamiriro ezvinhu, chekutanga pane zvese, une pekugara kana kwete. Kana…
Ndeapi mazana anowanzotora vatengi pavanotengesa imba?
Marii chaiyo inowanzoitirwa nevatengesi kubva pakutengesa imba? Ndakabvuma 3% Zvinoenderana nedunhu ripi. Tine kubva pa20000 kubva pa2%! asi isu tinofanirwa kutaurirana! Nesu - izvi zvinowanzo gadziriswa ...
Ndezvipi zvishambadzo zvisingawanzwisisiki nezvekutengesa imba pamba unoyeuka?
Ndeapi mashambadziro asina kujairika ekutengesa imba mumba yaunorangarira? Ini ndichatengesa imba iri pakati peMoscow, kana kuichinja kuti ive yedzinza remaguta mudunhu reTula. ——————- Kuhaya furati yemhuri isina vana vadiki, vasingaputi ...
Unogona sei kuverenga kukosha kwemusika weimba yega?
Ungaverenga sei yakanyanya kukosha musika weimba yega? hazvaigona kuve nyore .. nyora wega ndichakuudza .. Ndakaongorora zvakapetwa imba yangu .. ndakazvifunga .. uye kana zviri nyore .. mutengo wemusika unobva pachikumbiro .. unotora kubva kushambadziro ...
Chii chakaitwa kuvaka?
Chii chinonzi kuvaka equity? Chii chinonzi equity kuvaka Equity kutora chikamu mukuvakwa kwedzimba kwave kwakapararira munyika medu. Makambani ekuvaka uye ekudyara anokwezva mari kubva kune vane equity (varimi), uye ...
Zvinorevei kuti "kubhadharira pasi" mune mogeji?
Zvinorevei kuti "kubhadharira pasi" zvinorehwa mune mogeji? Chibvumirano chetatu chekodzero yekutora chikamu mukuvaka (kana padanho rekuvaka) kana chibvumirano chekutenga nekutengesa (kana imba yacho yabhadharwa) inopedzwa. + chibvumirano chechikwereti. Akakwereta ...
VaMsters realtors, vakatarisana nei?
MGSN vatengesi vakatarisana? Zvirinani kushandisa masevhisi emumiriri weshamwari yako ... Mazhinji masangano muMoscow, semuenzaniso, anonyengera kwete chete vashandi vavo - vamiririri, asiwo vatengi vavo ... Uye chii ...
kunyora sei "huya" kana "huya" nenzira kwayo?
kunyora sei "huya" kana "huya" nenzira kwayo? Chete - huya huya unouya unouya unouya kana kuuya? Ndiani pakati pedu anogona kutaura nechivimbo kuti haana kana kamwechete akafunga nezve kunyora izwi ...
Ko roja anonzi ani? Muroja akafanana neiye anorenda.
Ko roja anonzi ani? Muroja akafanana neiye anorenda. mudiki Landlord - anorenda kunze, Lessee anotora. Roja / Landlord - muridzi Landlord! uye…
Ndeipi basa rebhadha? uye yakasiyana sei nemari yekubhadhara pamwedzi?
Mari yekubhadhara ndeyei? uye zvakasiyana papi nemubhadharo wemwedzi wega? komisheni yekurenda? Pamwe komisheni kumumiriri?) Kana zvirizvo, saka iyi ndiyo mari yauchabhadhara kumumiriri ...
Mubvunzo kune realtors. Iko uye mune rupi ruwa rweMoscow kutenga imba yekurenda.
Mubvunzo wevatengesi. Ndeupi uye mudunhu reMoscow kutenga imba yekurendesa. dzimba dzakanaka dziri kufamba chinhambwe kubva kumetro) chero nzvimbo, asi zviri nani kuve padhuze nepakati nepakati ...
Mari yekubhadhara chikwereti inotorwa sei? Semuenzaniso, ini ndinotora chiuru chemazana rubles pamakore gumi, pa1000% pagore, saka ndichabhadhara
Mari yekubhadhara chikwereti inotorwa sei? Semuenzaniso, ndinotora 1000 000 10 rubles kwemakore gumi, pa12% pagore, zvinoreva kuti ndichabhadhara 12% yemari yekutanga ye1 rubles. Zvichazoitika ...
Ipa pfupiso pfupi yenyaya yaBelkin "The Young Lady-Varombo"
Ipa pfupiso pfupi yenyaya yaBelkin "The Young Lady-Varombo" Mune rimwe remapurovhinzi ari kure pane svom Tugilov, kunogara muchengeti anogara pamudyandigere Ivan Petrovich Berestov, ave nenguva yakareba ari chirikadzi uye asingaendi chero kupi. Ari kuita zvemumba ...
Mibvunzo ye59 mu database yakagadzirwa mu 0,860 masekondi.